ट्रम्प र बाइडेनको अन्तिम बहस: ट्रम्पको दावीप्रति बाइडेनको व्यङ्ग्य…! – Dainik Sangalo
ट्रम्प र बाइडेनको अन्तिम बहस: ट्रम्पको दावीप्रति बाइडेनको व्यङ्ग्य…!
“उनको कुरा सुन्ने हो र मान्ने हो भने उनले कोरोनाभाइरसको महामारी व्यवस्थापनका लागि जादु गर्ने बाहेक अरु केही देखिएन,” बाइडेनले भने ।
अर्का प्रतिस्पधी बाइडेनलाई भने कोरोनाभाइरस उत्पत्ति गराएको चीनलाई सजाय दिन के गर्छन भनेर सोधिएको थियो ।
Nextदसैंमा शुभसाइतको प्रतीकको रुपमा फूलपाती भित्र्याउने गरिन्छन्……..।
काठमाडौं कलंकी दुर्घटनामा मृत्यु हुने र घाइतेको पहिचान खुल्यो, घाइतेमध्ये चौधरीको अवस्था गम्भीर छ।
श्रीमान भारतमा छन्, पहिरोले श्रीमती दुई छोरा र १० महिनाकी छोरीको लियो ज्यान